D-amphetamine သွေးဆောင်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများအရလိင်အပြုအမူများနှင့်အမျိုးသားကြွက်များ၏နျူကလိယအက်တမ်များတွင်တိုးမြှင့်သော dopamine efflux (1999) - Your Brain On Porn
D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း (1999) အပြီးအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux ၏နည်းပြ
မှတ်ချက် - ဂရပ်များအများအပြားပါရှိသည်။
J ကို neuroscience ။ 1999 Jan 1;19(1):456-63.
Fiorino DF1, Phillips က AG က.
အပြည့်အစုံ - PDF
ထိုကဲ့သို့သောကိုကင်းနှင့် D-amphetamine ကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်စိတ်ကြွဆေးများထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစီမံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအသိစိတ်သည်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမျိုးဆက်တွင်ပါ ၀ င်သည့် limbic-motor circuit တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ပစ္စုပ္ပန် microdialysis လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens (NAC) အတွက် D-amphetamine- သွေးဆောင် sensitization ၏ dopamine (DA) efflux အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကြွက်များအားအထွေထွေထိုးဆေး ၁၀ ကြိမ်အတွက်တစ်နေ့လျှင် D-amphetamine (၁.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) သို့မဟုတ်ဆားကိုတစ်ကြိမ်ထိုးပေးခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုရပ်စဲပြီးနောက်သုံးပတ်အကြာတွင် microdialysis ပြုလုပ်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်ကြွက်များကိုလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တစ် ဦး လက်ခံအမျိုးသမီးမျက်နှာပြင် (1.5 vs 10%) နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်အခါ nonsensitized ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် D-amphetamine-sensitized ကြွက်၏ NAC အတွက် DA တစ်ခုတိုးပွား efflux ရှိခဲ့သည်။ တောင်တက်ရန်သိသိသာသာတိုတောင်းခြင်းနှင့် copulatory အပြုအမူပမာဏကို၏ယေဘုယျတိုးခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြသကဲ့သို့, မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားသောအခါအာရုံခံကြွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ပြသခဲ့သည်။ copulation စဉ်အတွင်း sensitized နှင့် nonsensitized ကြွက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အခြေခံကနေ NAC DA ပြင်းအားအတွက်သိသိသာသာတိုးရှိခဲ့သည်ပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံး 35 မိ copulatory နမူနာစဉ်အတွင်း (17 vs 10%) စဉ်အတွင်း sensitized ကြွက်၏ NAC အတွက် DA efflux အတွက်သာ။ ကြီးမြတ်တိုးရှိ၏ ဤရလဒ်သည်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမူအကျင့် sensitization ထိုကဲ့သို့သောလိင်အဖြစ်သဘာဝအပြုအမူ, မှ "Cross-sensitize" နိုင်ကြောင်းတိုးမြှင့် NAC DA ဖြန့်ချိဒီအပြုအမူ၏အစာစားချင်စိတ်နှင့် consummatory ရှုထောင့်များ၏လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်ကိုပြသသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဃ-စိတ်ကြွဆေးအဖြစ် psychostimulants မှယခင်ထိတွေ့မှု, မူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိုးမြှင့်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု, အမူအကျင့်ာင်းအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ် (limbic-မော်တာ circuitry အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတော့သည်ဖြစ်ပါသည်Robinson နဲ့ Berridge, 1993; ကိုယ်ပိုင်နှင့် Nestler, 1995; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997) ။ ဤသည် circuitry (လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍPhillips က et al ။ , 1991; Kalivas et al ။ , 1993; Robbins နှင့် Everitt, 1996) ။ ဒါဟာ (စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူဖို့တုန့်ပြန်ဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုအတူတူပင်အာရုံကြောယန္တရားများ, function ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအချိန်များအတွက်တွေးဆထားသည်Robinson နဲ့ Berridge, 1993; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997).
psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြောက်မြားစွာ neurotransmitters နှင့်အရေးပါပါဝင်ကြောင်းရှုပ်ထွေးသောအပြောင်းအလဲရလဒ်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်သော်လည်းများစွာသောလေ့လာမှုတွေ (DA) စနစ်ပါ (mesolimbic dopamine အတွင်း function ကိုတစ်ခုတိုးမြှင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီRobinson နဲ့ Berridge, 1993; ကိုယ်ပိုင်နှင့် Nestler, 1995; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997) ။ အမှန်မှာထိုနျူကလိယ accumbens အတွက် DA ၏ဖြန့်ချိ (NAC) လုပ်ခဲ့ပြီး, mesolimbic dopaminergic အာရုံခံတဲ့ terminal ကိုဧရိယာ, (အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းရေရှည်စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်အရှိဆုံးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်Robinson နဲ့ Becker က, 1986; ပေါ်လ်ဆန်နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1995; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Kuczenski et al ။ , 1997).
Mesolimbic DA (အဓိကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအရက်သောက်, နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်လိင်အဖြစ်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေကိုစည်းရုံးကြောင်းရှုပ်ထွေးဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, တစ် modulator တွေကိုအဖြစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဘလက်ဘန်း et al ။ , 1992; Kalivas et al ။ , 1993; Kiyatkin, 1995; Salamone, 1996) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး hypersensitive ဒီ DA လမ်းကြောင်းပြန်ဆိုကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်, ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်, (ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်တွေကိုမှ attributing မက်လုံးပေး salience ၎င်း၏ function ကိုကြီးထွားများပြားစေRobinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ (psychostimulants မှအမူအကျင့်ာင်းလည်းသဘာဝဆုလာဘ်များမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးမြှင့်နိုင်မသရုပ်ပြFiorino နှင့် Phillips က, 1995).
ဒါဟာကောင်းစွာ (ကလိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီး၏မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများအတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းတည်တတ်၏သဲသောင်ပြင်, 1941; Madlafousek နှင့် Hlinak, 1983) ။ Mesolimbic dopamine (သုတ်ရည်ထိအတွက်အရေးပါသော facilitatory အခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသည်Everitt, 1990; Pfaus နှင့် Phillips က, 1991; Mas, 1995; Melis နှင့် Argiolas, 1995), နှင့် microdialysis လေ့လာမှုအတော်များများအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုး / အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်နှစ်ဦးစလုံးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်တိုးလာ NAC DA efflux (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြDamsma et al ။ , 1992;Wenkstern et al ။ , 1993; Mas, 1995; Fiorino et al ။ , 1997a) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးလေ့လာမှုမှာတော့ D-စိတ်ကြွဆေးမှယခင်ထိတွေ့လိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက် (အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ facilitatedFiorino နှင့် Phillips က, 1995) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဤပံ့ပိုး NAC DA ၏တိုးမြှင့်ဖြန့်ချိကကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆပေးထား, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု extracellular NAC DA အာရုံစူးစိုက်မှု Tod-စိတ်ကြွဆေး sensitized လိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အတွက်တိုးရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် microdialysis ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးဃ-စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှု NAC DA efflux ဃ-စိတ်ကြွဆေး-sensitized ကြွက်များတွင်ထင်ရှားလုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းလွတ်လပ်သောအတည်ပြုချက်ကိုပေးကိုပေးတော်မူ၏။
ဘာသာရပ်များ။ အထီး Sprague Dawley ကြွက် (225-250 gm) ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတက္ကသိုလ်မှရရှိသောနှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။ ကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်း (7 pm တွင်ရန်7လေးချွတ်ထွန်း) ကပြောင်းပြန်အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီး Long-အီဗန်ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ်ကနေဒါ, စိန့် constant မှာ Quebec, ကနေဒါ) တူညီသောပြောင်းပြန်အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်သီးခြားကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အပူချိန် ~20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, အကြွက်များခဲ့ ကြော်ငြာ libitum အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ စမ်းသပ်ခြင်းအမှောင်သံသရာ၏အလယ်တွင်တတိယကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။4ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ခြင်းမတိုင်မီအနည်းဆုံး; အမျိုးသမီးကြွက်မြန်မာနိုင်ငံသ halothane ဓာတ်ငွေ့မေ့ဆေး (Ayerst Laboratories Fluothane) အရ ovariectomized ခဲ့ကြသည်။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွအမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ် session တစ်ခုမတိုင်မီအသီးသီး, အရေပြားအောက်ဆုံး estradiol benzoate (10 μg) ၏ထိုးခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းသော (500 μg) က 48 နှင့်4နာရီသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စမ်းသပ်မှုအစပျိုးခဲ့ကြသည်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌အမျိုးသမီးလိင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်အထီးကြွက် ketamine Hydrochloride နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည် stereotaxic ခွဲစိတ်မီနှင့် xylazine (100 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) (10 / ကီလိုဂရမ်, ip mg) ။ Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလမ်းညွှန် cannulae (19 gauge) က NAC (bregma ထံမှသြဒီနိတ်:; medial, -1.7 မီလီမီတာနှင့်အီရတ်တွင်ထံမှ ventral, -1.1 မီလီမီတာ; anterior + 1.0 မီလီမီတာအပြားခေါင်းခွံ) ကျော်ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျနှင့်သွားအတူဦးခေါင်းခွံမှလုံခြုံ acrylic နှင့်ရတနာရဲ့ screw နှစ်ခု။ တစ်ဦးက 19 gauge ဝါယာကြိုး "လေ့ကျင့်ရေး post ကို" ဟုအဆိုပါလမ်းညွှန် cannulae နောက်ကွယ်မှဦးခေါင်းခွံ၏ထိပ်ပေါ်မှာခိုင်မြဲခဲ့သည်။
ယန္တရား။ စမ်းသပ်ခြင်း (48 × 24 × 35 စင်တီမီတာ) အရှည်တစ်လျှောက်တွင်နှစ်ဦးကို 32 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်လမ်းကြားအတွက်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပွင့်လင်း Plexiglas partition ကို (12 စင်တီမီတာ) က bisected အခန်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ကြွက်အခနျးနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းပေါ်တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းအကြားလွတ်လပ်စွာရွှေ့နိုင်ဘူး။ တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးကိုင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည့်တစ်ဦး antechamber (24 × 8 × 16 စင်တီမီတာ), ထိုယန္တရား၏တဦးတည်းအဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးနှင့်ဝါယာကြိုးကွက်မျက်နှာပြင်အားဖြင့်အခန်းထဲက၏အဓိကကိုယ်ထည်ကနေကွဲကွာခဲ့သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် photobeam ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများ / detectors အလှုပ်ရှားမှုအရေအတွက် (partition ကိုတဦးအခြမ်းကနေလှုပ်ရှားမှုတွေအခြားမှ) ၏အရေအတွက်ကကွန်ပျူတာ (2 Hz စကင်မှုနှုန်း) ကအလိုအလျှောက်စောင့်ကြည့်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သည်များကျန်နေတဲ့ကြွက်အနံ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု minimize လုပ်ဖို့အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုများအကြားတစ်ဦးပျော့ Windex ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သန့်စင်ခဲ့ပါသည်။
အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction ။ ထိုးဆေးတစျခုစီစမ်းသပ်မှုအတွက် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့အတူတူအခန်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်အထီးကြွက်ဟာထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေး (AMPH) သို့မဟုတ်ဆားထိန်းချုပ်မှု (အဆက်) အုပ်စုများဖြစ်စေရန်ကျပန်းတာဝန်ကျတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု၏အစအဦးမှာတစ်ဦးအရည်ဆုံလည် (Instech, 375 စက္ကန့်) တွဲခဲ့သည့်တစ်ဦးသံမဏိကွိုင်, ထိုစမ်းသပ်ခြင်းအခန်းထဲက၏ထိပ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတွေ့ (က microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလမ်းညွှန်ကော်လာကိုသုံးပြီးလေ့ကျင့်ရေး post မှလုံခြုံခဲ့သည် Fiorino et al ။ , 1993 အသေးစိတ်ကို) ။ ဒီထုံးစံများတွင်ကြွက်များ microdialysis များအတွက်လိုအပ်သောယန္တရားမှနေသားတကျဖြစ်လာသည်။ သို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် (30 ml / ကီလိုဂရမ်; Baxter ကော်ပိုရေးရှင်း; ကြွက် (Smith က-Kline Beecham, Oakville, ON 1.5 ကီလိုဂရမ် / mg) စမ်းသပ်ခြင်းအိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့နေရာချခြင်းနှင့်, လေ့ကာလမိတစ် 1 ပြီးနောက်ဖြစ်စေဃ-စိတ်ကြွဆေး sulfate ၏ intraperitoneal ထိုးပေးခဲ့ , တိုရွန်တို, အွန်, ကနေဒါ) ။ နှစ်နာရီထိုးပြီးနောက်ကြွက်ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်။ ထိုး2ထိုးစုစုပေါင်းအဘို့အတစ်ကြိမ် 10 ဃပေးထားခဲ့ကြသည်။ Activity ကိုရေတွက် 10 မိ bins အတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသဖြင့်, ဆယ်ဘို့တဘို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်သိသိသာသာတိုးအပြုအမူာင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စမ်းသပ်မှု။ အဆိုပါ microdialysis လေ့လာမှုပို့ချခြင်းမပြုမီ, တစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှု (စမ်းသပ်မှု 1) (ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စုများအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်n = 10, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ) အ microdialysis လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သတ်အတွင်းမှာ afterd-စိတ်ကြွဆေးာင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားအတည်ပြု။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအားလုံးကြွက် locomotor လှုပ်ရှားမှု 10 စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအရည်ဆုံလည်မှဦးခေါင်းစည်းဝေးပွဲကိုချိတ်ဆက်သောကွိုင်မှ habituated ခဲ့ကြသည်။ နှစျဆယျ့တစျရက်ပေါင်းဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ဆား၏နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်, AMPH နှင့်အဆက်အုပ်စုများအတွက်လိင်နုံကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးကြွက်တစ်ဝါယာကြိုးမျက်နှာပြင်အားဖြင့်အဓိကစမ်းသပ်မှုအခန်းထဲကထဲကခြားနားသော antechamber ထဲတွင်နေရာခဲ့သောပြီးနောက် unilevel အခန်းတစ် 60 မိအခြေခံကာလ၏ပါဝင်သည်။ 10 မိပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်သုတ်ရည်ထိ 30 မိဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးနောက်ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှားပြီးခဲ့, နှင့်အထီးကြွက် postcopulation ကာလမိကာနောက်ထပ် 60 များအတွက်အခန်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်း (MF), (1) intromission ကြိမ်နှုန်း (IF), mount (2): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်သင့်လျော်သော software များ (Sonoko Ogawa ၏ယဉ်ကျေး, Rockefeller တက္ကသိုလ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစံအတိုင်းအတာမှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (3) သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေ (EF), (4) mount နှင့် (5) intromission latency [ML နှင့် IL; ထိုပထမဦးဆုံးတောင်ပေါ်မှာမှအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုသို့မဟုတ် intromission ကနေအချိန် (စက္ကန့်)], (6) သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် [EL; intromissions ၏အချိန်ကိုပထမဦးဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်မှပထမဦးဆုံး intromission ထံမှ (စက္ကန့်)], (7) အရေအတွက်ကပထမဦးဆုံးသုတ်ရည်လွှတ် (IE ကိုမှ1), (8) postejaculatory ကြားကာလ [pei; လာမယ့် intromission မှပထမဦးဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်ကနေအချိန် (စက္ကန့်)], (9) interintromission ကြားကာလ (III ကို; EL / IE ကို1), နှင့် (10) ကို intromission အချိုး (IR; IF / (MF + IF)) ။ တောင်ပေါ်နှင့် intromissions များအတွက်လိုအပ်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နေကြတယ်Sachs နဲ့ Barfield (1976).
Microdialysis ။ ကြွက် (n = 10, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ) စမ်းသပ်မှု 12 မတိုင်မီ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး 18-2 နာရီနှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့်အတူစမ်းသပ်ခန်း၌ထားကြ၏ ကြော်ငြာ libitumအစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများနံနက်တွင်, microdialysis နမူနာတိုင်း 10 မိကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုငါးဆင့်ပါဝင်သည်: (1) အခြေခံ (အနည်းဆုံး 60 မိ); မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှ (2) estrous အမျိုးသမီး (10 မိ); estrous အမျိုးသမီး (3 မိနစ်) နှင့်အတူ (30) သုတ်ရည်ထိ; ကြွက်ဃ-စိတ်ကြွဆေး (4 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့ထိုးခဲ့ပြီးသောအပြီး (60) postcopulation ကြားကာလ (1.5 မိ); နှင့် (5) postinjection ကာလ (120 မိ) ။ စမ်းသပ်မှု 1 ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
Microdialysis လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဝိသေသလက္ခဏာများယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့ကြ (Fiorino et al ။ , 1997a) ။ DA နှင့်၎င်း၏ metabolites dihyroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) နှင့် homovanillic အက်ဆစ် (HVA) ပါဝင်သည်ရာ microdialysate Analytics ၏ပြင်းအား, (HPLC လြှပျစစျထောက်လှမ်းနည်းလမ်းများအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Fiorino et al ။ , 1997a) ။ ကောက်ယူပုံမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေး Recovery, စသည်တို့အတွက် နှင့်အခန်းအပူချိန်မှာ, ခဲ့ကြသည်: DA, 20.0 ± 0.9% သည် ဖြစ်. , DOPAC, 15.2 ± 0.9%; နှင့် HVA, 14.2 0.6% ±။
အဆိုပါ microdialysis စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်တစ်ခုအလွန်အကျွံပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ဆားနှင့် formalin (4%) နှင့်အတူ intracardially perfused ။ အေးစက်နေတဲ့ဦးနှောက်ကိုခွဲခဲ့ကြနှင့် Coronal ကဏ္ဍများ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏နေရာချထားဆုံးဖြတ်ရန် cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု2အတွက် NAC အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကိုနှင့်အတူကြွက်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
စာရင်းအင်းများ။Activity ကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစီအမံ ANOVAs သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရယူတဲ့အခါအကြား-အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ရိုးရှင်းသောအဓိကသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်း-အုပ်စုများ post ကို hoc စုစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုရေတွက်၏နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ Newman က-Keuls စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Neurochemical ဒေတာ Dunnett ရဲ့စမ်းသပ်မှုထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းထဲကနေအတွင်း-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်စေရန်အသုံးပြုခဲ့ မှလွဲ. တူညီထုံးစံ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအချက်အလက်များ၏သီးခြားစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (လေ့လာဆန်းစစ်ရှင်သန်မှုအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးသော ML နှင့် IL နှစ်ဦးစလုံး၏ Kaplan-Meier ကွက်သုံးBloch et al ။ , 1993; လျူ et al ။ , 1997) ။ mount နှင့် intromit နှင့်ဤအပြုအမူဖေါ်ပြခြင်းဘာသာရပ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းဖို့ latency လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းများအစီအမံဖြစ်ကြသည်။ ဤအတိုင်းတာနှစ်ယောက်စလုံးစမ်းသပ်မှုအတွင်းအပြုအမူပြကြွက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းဆန့်ကျင် latency ကြံစည်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီး Kaplan-Meier ကွက်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း mount သို့မဟုတ် intromit ရန်ပျက်ကွက်သူကိုဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ဒေတာများချန်လှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မတရားတန်ဖိုးကိုမပေးသောသော ADDED အားသာချက်ရှိပါတယ်။
ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS နှင့် Statistica စာရင်းအင်းဆော့ဖျဝဲ packages များသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1: အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေးအကဲဆတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ AMPH အုပ်စုတွင်ကြွက်များ 10 ထိုး (ပုံ၏သင်တန်းကျော်တစ်တိုးတက်သောတိုးမြှင့် ind-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ 1 A) ။ လှုပ်ရှားမှု၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးအဆိုပါ AMPH အုပ်စုသည် (Newman က-Keuls အတွက်ထိုးဆေးဖြတ်ပြီးရေတွက်ရှိ၏ p<0.01), အမူအကျင့် sensitization Tod-amphetamine ညွှန်ပြ။
A, B, စမ်းသပ်မှု2အတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက် 1 နာရီကျော်စုဆောင်းလှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ဆားဆေးထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (A) နှင့်စမ်းသပ်မှု2(B) ။ အဆိုပါဒေတာအတောအတွင်း (± SEM) လှုပ်ရှားမှုရေတွက်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ အုပ်စုတစ်စုနဲ့ထိုးအရေအတွက်ကများအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်၌ရှိ၏: စမ်းသပ်မှု 1, F(1,16) = 5.60,p <0.05; စမ်းသပ်မှု ၂၊F(1,18) = 12.44, p <0.01 ။ အုပ်စုအကြားနှိုင်းယှဉ်မှု ***p <0.001, ရိုးရှင်းသောအဓိကသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး။ အတွင်းအုပ်စုအတွင်းနှိုင်းယှဉ်မှုများ၊ †p <0.01, ‡p <0.001, Newman-Keuls သုံးပြီး post ကို hoc စမ်းသပ်။
စားပှဲ 1 စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစီအမံကိုအကျဉ်းချုပ်။ အဆိုပါ AMPH အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း (ရှိခဲ့သည်n အဆိုပါအဆက်မှ = 10) အုပ်စုတစ်စုဆွေမျိုး (n mount မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် = 10) အုပ်စု (F (1,14) = 4.80;p <0.05) နှင့် intromit (F (1,14)= 5.92; p <0.05) ။ Mount Latency အတွက် Kaplan-Meier Curves ၏ရှင်သန်မှုကိုလေ့လာခြင်း (ပုံ။2 A, left panel က) နှင့် intromission အောင်းနေချိန် (ပုံ။2 A, ညာဘက် panel က), (ရာထူးစာရင်းဇယား = 9.43 Log AMPH-ကုသကြွက်များတွင်အပြုအမူတစ်ခုပံ့ပိုးအတည်ပြုခဲ့သည် p = 0.0021; , ရာထူးစာရင်းဇယား = 10.48 Logp အသီးသီး = 0.0012,) ။
စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ
mount မှ latency နှင့် intromit အပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ဆား pretreatment ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Aတောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန်များအတွက်, Kaplan-Meier ကွေး (left panel က) နှင့် intromission အောင်းနေချိန် (ညာဘက် panel က) စမ်းသပ်မှု 1 ၌တည်၏။ လွတ်လပ်သောရှင်သန်မှုအောင်းနေချိန် mount မှလေးစားမှုနှင့်အတူထိခိုက် (AMPH) နှင့် nonsensitized (အဆက်) ကြွက် (ရာထူးစာရင်းဇယား = 9.43 Log အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြသလေ့လာဆန်းစစ်; p = 0.0021) နှင့် intromission အောင်းနေချိန် (ရာထူးစာရင်းဇယား = 10.48 Log; p = 0.0012) ။ Bတောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန်များအတွက်, Kaplan-Meier ကွေး (left panel က) နှင့် intromission အောင်းနေချိန် (ညာဘက် panel က) စမ်းသပ်မှု2၌တည်၏။ လွတ်လပ်သောရှင်သန်မှုအောင်းနေချိန် mount မှလေးစားမှုနှင့်အတူထိခိုက် (AMPH) နှင့် nonsensitized (အဆက်) ကြွက် (ရာထူးစာရင်းဇယား = 6.12 Log အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြသလေ့လာဆန်းစစ်; p = 0.0134) နှင့် intromission အောင်းနေချိန် (ရာထူးစာရင်းဇယား = 4.38 Log;p = 0.0364) ။
intromissions တစ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ယခင်ဃ-စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပမာဏတစ်ခုခြုံငုံတိုး (ရှိ၏F (1,16) = 5.89; p <0.05) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (F (1,16) = 6.37; p<0.05) CONT အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမိနစ် 30 စုဆောင်းခြင်းကာလအတွင်း။ သို့သော် copulation အစပျိုးပြီးနောက်ပထမဆုံး ejaculatory series ၏အခြားဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်သော EL, PEI, IE1, III, IR, အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။
စမ်းသပ်မှု 2: အ NAC အတွက် dopamine efflux နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ afterd-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ာင်း
ထပ်ခါတစ်လဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုတဖန်သင်္ဘောသဖန်း (AMPH ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ာင်းသွေးဆောင်။1 B) ။ လှုပ်ရှားမှု၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးဆေးထိုး 1 (Newman က-Keuls မှဆေးထိုး 10 ကနေရေတွက်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် AMPH အုပ်စုတွင်ကြွက်များ, D-စိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပြသ; p <0.05) ။
စမ်းသပ်မှု2အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ (n = 8, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ) စားပွဲတင်မှာပြနေကြသည် 1။ အဆိုပါ AMPH အုပ်စုတစ်စု mount နှင့် intromit ဖို့တိုတောင်း latency ပြသပေမယ့်အဲဒီအစီအမံကတော့အဆက်အုပ်စုရှိသူများအနေဖြင့်သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ရှင်သန်မှုပုံကိုကြည့်ပါ (ML နှင့် IL များအတွက် Kaplan-Meier ခါးဆစ်၏လေ့လာဆန်းစစ်။4A), ရာထူးစာရင်းဇယား = 6.12 Log (AMPH ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဖျောပွခဲ့p = 0.0134; , Rank စာရင်းဇယား = 4.38 Logp အသီးသီး = 0.0364,) ။ အဆိုပါ AMPH အုပ်စုတစ်စုကိုလည်း (ထိုအဆက်အုပ်စုတစ်စုထက် copulatory ကာလမိသည့် 30 အတွင်းပိုပြီးသုက်အောင်မြင်F (1,14) = 5.56; p <0.03) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စမ်းသပ်မှု ၂ ရှိကြွက်များသည်စမ်းသပ်မှု ၁ ၏ကြွက်များထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဆင့်ကိုပိုမိုမြင့်မားစွာဖော်ပြခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ထုံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းပမာဏစုဆောင်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသခဲ့သည်။
D-စိတ်ကြွဆေးမှယခင်ထိတွေ့ DA, DOPAC, ဒါမှမဟုတ် HVA (ဇယား၏ Basal ပြင်းအားပြောင်းလဲပစ်ဘူး2) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ပုံနှင့်ဆက်စပ် NAC DA efflux အတွက်ခြုံငုံအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။3) ။ အထူးသ AMPH ကြွက်များတွင် DA ၏ပြင်းအားကိုသိသိသာသာအမျိုးသမီးသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်အခါကာလအပါအဝင်စမ်းသပ် session ရဲ့အားလုံးအဆင့်, တလျှောက်လုံးအခြေခံမှဆွေမျိုးတိုးမြှင်နှင့်သူမ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက် 20 မိကာလအတွက်ခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, အဆက်ကြွက်များတွင် DA ပြင်းအားအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးသုတ်ရည်ထိနဲ့ဆက်စပ်နမူနာဖို့ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှလေးစားမှုနှင့်အတူဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်ကတစ်လက်ခံအမျိုးသမီး (SCR; အချိန် = 20 မိ) ၏တင်ပြချက်ဟာ AMPH အုပ်စုသည် (+ 35% အတွက်အခြေခံတန်ဖိုးများကနေ NAC DA ပြင်းအားအတွက်သိသိသာသာတိုးမှု, p <0.01) ဒါပေမယ့် CONT အုပ်စု (+ 17%) တွင်မရ။ နှစ် ဦး စလုံးအုပ်စုများအတွက်စုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်း DA efflux အတွက်နောက်ထပ်တိုးရှိခဲ့သည်။ AMPH ကြွက်များတွင် DA သည်ပထမဆုံး copulatory နမူနာကာလ (အများဆုံးအချိန် - ၃၀ မိနစ်၊ + ၆၀%) အတွင်းတွင်အများဆုံးပါဝင်မှုရရှိခဲ့ပြီး NAC DA သည်အမျိုးသမီးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်မိနစ် ၂၀ ခန့်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ CONT အုပ်စုတွင်အများဆုံး DA ပါဝင်မှုသည် ၁၀ မိနစ် copulatory နမူနာ (အချိန် = ၄၀ မိနစ်၊ + ၄၇%) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
% အခြေခံ 100 မှသက်ဆိုင်ရာ Analytics ၏ Basal ပြင်းအားကိုဆိုလိုတာ
နျူကလိယအတွင်းအပြောင်းအလဲများ (dopamine efflux accumbensလိုင်းဂရပ်) အခြေခံစဉ်အတွင်း (Bas), တစ်လက်ခံအမျိုးသမီး (မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်ခဲ့စဉ်scr), သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းနှင့်အဆက်နှင့် AMPH ကြွက်အဘို့အသုတ်ရည်ထိပြီးနောက်။ ဘားဂရပ်များ (တောင်ပေါ်ပေါင်း intromissions ၏နံပါတ်ပြသထိပ်ဆုံးဘားဂရပ်) နှင့်သုက် (အောက်ခြေဘားဂရပ်) သုံး 10 မိနမူနာစဉ်အတွင်းအုပ်စုတိုင်းအဘို့ဖော်ပြပေး။ *p <0.05; **p <0.01 ရိုးရှင်းသောအဓိကသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး။ အတွင်း - အုပ်စု Newman က - Keuls post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (သိသာထင်ရှားp <0.05) နျူကလိယအတွက်တိုး AMPH (အချိန် = 20-50 မိနစ်) နှင့် CONT (အချိန် = 30-50 မိနစ်) ကြွက်များတွင်အခြေခံကနေ DA ပြင်းအား accumbens
အဆိုပါ AMPH အုပ်စု NAC DA အတွက်တိုးလာသည့်အဆက် group မှရရှိသောတိုးထက်သိသိသာသာကြီး, နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီး (မျက်နှာပြင် (အချိန် = 20 မိ) နောက်ကွယ်မှအခါF (1,182)= 4.76; p <0.05) နှင့်ပထမ ဦး ဆုံး 10 မိနစ်စုဆောင်းခြင်း (အချိန် = 30 မိနစ်) (F (1,182) = 6.32; p <0.05) ။ အဆိုပါ AMPH အုပ်စုတွင် NAC DA efflux (သိသိသာသာတိုး = 30 မိနစ်) ၏တိုးမြှင့်အရေအတွက်နှင့် intromissions နှင့်အတူတိုက်ဆိုင် (F (1,28) = 18.56; p <0.01) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (F (1,18) = 5.09; p<0.05) CONT အုပ်စုဆွေမျိုး။
DOPAC နှင့် HVA ၏ Extracellular ပြင်းအားကိုလည်း (သုတ်ရည်ထိပြီးနောက်ပုံတိုးတက်လာခဲ့သည်။ 4) ။ အခြေခံမှဆွေမျိုး DOPAC ပြင်းအားအတွက်တစ်ဦးကသိသိသာသာတိုးနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွင်းပထမဆုံး copulatory ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်သိသိသာသာအဆက်ကြွက် (အများဆုံး, အချိန် = 70 မိ; + 40%) အတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက် 40 မိဘို့ခြီးမွှောကျခံနေရ AMPH ကြွက်များတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက်နှင့် 60 မိ (အများဆုံး, အချိန် = 40 မိ; + 55%) ။ အခြေခံကနေ HVA များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်သည့် AMPH အုပ်စုသုတ်ရည်ထိကာလမိပထမဦးဆုံး 10 (အများဆုံး, အချိန် = 60 မိ; + 50%) အတွက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုအောင်မြင်နဲ့သိသိသာသာသုတ်ရည်ထိပြီးနောက် 30 မိဘို့ခြီးမွှောကျခံနေရပါသည်။ သို့သော် AMPH ကြွက်များတွင် HVA ပြင်းအားနေဆဲရုံဃ-စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှု (+ 28%) မတိုင်မီခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ အဆက်ကြွက်များတွင် HVA ၏ပြင်းအားသိသိသာသာ thed-စိတ်ကြွဆေးဆေးထိုး (အချိန် = 10 မိနစ်) သည်အထိ copulatory ကာလ (အချိန် = 50 မိ) မိနစ်ပြီးခဲ့သည့် 110 ထံမှမွှငျ့တငျ, နှင့် + 49% (အချိန် = 70 မိ) ၏အမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများတွင်မည်သည့်အချက်မှာအုပ်စုများအကြား metabolite ပြင်းအားမစာရင်းအင်းခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။
DOPAC အတွက်အပြောင်းအလဲများ (ထိပ်တန်း panel က) နှင့် HVA (အောက်ခြေ panel ကအခြေခံစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်) ပြင်းအား (Bas), တစ်လက်ခံအမျိုးသမီး (မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်ခဲ့စဉ်scr), သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိပြီးနောက်။ အတွင်း-အုပ်စုတစ်စု Newman က-Keulspost ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (သိသာထင်ရှားp <0.05) နျူကလိယအတွက်တိုး AMPH အတွက်အခြေခံကနေ metabolite ပြင်းအား accumbens (DOPAC, အချိန် = 30-80 မိ; HVA, အချိန် = 30-90 မိနစ်) နှင့် CONT (DOPAC, အချိန် = 30-90 မိ; HVA, အချိန် = 50-) 100 မိနစ်) ကြွက်။
D-စိတ်ကြွဆေး၏ system administrator (1.5 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုအဆက်အုပ်စုသည် (ပုံဖို့ AMPH အုပ်စုသည်ဆွေမျိုးများကတစ်ဦးထိခိုက်အပြုအမူနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုခဲ့သည်။5) ။ ANOVA လှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်အပေါ်အုပ်စုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှု (ထင်ရှားတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံF (14,196) = 28.50; p <0.01) ။ Newman-Keuls မှသုံးသပ်ချက်အရ d-amphetamine အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက် ၂ နာရီဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်တိုးလာသည်။ post ကို hocစမ်းသပ်မှုများ။ အဆိုပါ AMPH အုပ်စုကို (ပထမ 30 မိအတွက်အဆက်အုပ်စုတစ်စုထက်လှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်၏တစ်ဦးသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးပြီးနောက်များနှင့်စုစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆေးထိုး (413.5 ± 37.7 vs 303.6 ± 37.8) အပြီးရေတွက်ပြသF (1,14) = 4.84; p <0.05) ။
နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲများတဲ့ D-စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှု (1.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) မှတုန့်ပြန် dopamine efflux accumbens ။ *p <0.05; **p <0.01 ရိုးရှင်းသောအဓိကသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး။ Dopamine ပြင်းအားနှင့်လှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်သည်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (၂) နာရီအကြာတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက်ကာလအတွင်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။Bas) နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများဖြစ်သည်။
extracellular NAC DA အတွက် concomitant တိုး (အဆက်နှင့် AMPH အုပ်စုများအတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက်ရှိခဲ့သည်F (14,196)= 39.16; p <0.01) နှင့် AMPH အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိတိုးဆေးထိုးပြီးနောက်ပထမ 40 မိနစ်အတွင်း CONT အုပ်စုထက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည် (ပုံ။ 5, ထိပ်တန်း panel က) ။ DA နှစ်ယောက်စလုံး metabolites သည့်အဆက်နှင့် AMPH အုပ်စုများအတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက်လျော့နည်းသွားသည်။ D-စိတ်ကြွဆေး၏ system administrator (အချိန် = 10 မိ, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ) အ AMPH အုပ်စုတွင်နိမ့်ဆုံးကတော့အဆက်အုပ်စု 48% ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် 44% အထိထိုးပြီးနောက် DOPAC efflux 50 မိအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းခဲ့သည်။ အသီးသီးကြွက်; နှင့် AMPH (40% = 50 မိနိမ့်ဆုံး, အချိန်); HVA ပြင်းအားအတွက်အများဆုံးကျဆင်းခြင်းသိသိသာသာစိတ်ဓာတ်ကျတန်ဖိုးများ 80 နှင့် 82 မိအဆက်အတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက် (100% နိမ့်ဆုံး, အချိန် = 83 မိ) သို့ရောက်ရှိနောက်ထပ်နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ DA metabolite ပြင်းအားအတွက်အုပ်စုများအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မည်သည့်အချက်မှာရှိခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးတုံ့ပြန် extracellular NAC DA metabolite ပြင်းအားအတွက်လူထုကိုအပြောင်းအလဲများကို DA efflux လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုတိုးလာတဲ့အခါကာလအတွင်း andd-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (အသီးသီးဆိုလိုသည်မှာတိုးနှင့်ကျဆင်းခြင်း,), တစ်ဖန်ပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့် inferring DA ဂီယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မွေးရာပါပြဿနာများအလေးပေး DA metabolite efflux (Fiorino et al ။ , 1997a;အိုနေးလ် et al ။ , 1998).
Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးဝစော bregma (ပုံကနေ + 1.60 မီလီမီတာ + 2.20 ကနေတိုးချဲ့နေတဲ့အကွာအဝေးအတွင်း NAC နှစ်ခုစလုံး shell ကိုနှင့်အမာခံဒေသများအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 6).
စမ်းသပ်မှု2များတွင်အသုံးပြုကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွင်း microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏တည်နေရာ။ ဒေါင်လိုက်အနက်ရောင်လိုင်း အဆိုပါ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏တက်ကြွသောဖိုင်ဘာဧရိယာ၏တည်နေရာကိုက်ညီတဲ့။ ရှင်းလင်းပြတ်သား၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်အဆက်ကြွက်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကိုယင်းအပေါ်ပြသနေကြသည် လက်ဝဲဘက်AMPH ကြွက်များ၏နှင့်သူတို့အပေါ်ပြသနေကြသည် မှန်သော။ ကနေ redrawn မှု Coronal ဦးနှောက်ကဏ္ဍများ Paxinos နှင့် Watson (1997).
D-စိတ်ကြွဆေးမှထပ်ခါတစ်လဲလဲနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှု, အမူအကျင့်ာင်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်, အရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက် (အတည်ပြု, လိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ facilitatedFiorino နှင့် Phillips က, 1995) ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးပွား NAC DA efflux ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသော microdialysis စမ်းသပ်မှုအတွက်နောက်တဖန်ပုံတူကူးယူခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်သာ၏ရလဒ်များကိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် mesolimbic DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံရှိသော limbic-မော်တာ circuitry အတွက်ပြောင်းလဲသောအယူအဆ buttress, အထူးသ mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်းရန်, နှစ်ဦးစလုံး psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ထိခိုက်အပြုအမူအထောက်အကူပြုနှင့်သဘာဝ မက်လုံး။
အစောပိုင်းကလေ့လာမှုစနစ်တကျမော်ဖင်းအကိုက်ထိုး (နဲ့အတူအကြိမ်ကြိမ်တွဲခဲ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်များတွင် facilitated ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိမစ်ချယ်နှင့် Stewart က, 1990) ။ အထူးသစိတ်ခွန်အားနိုးထိုကဲ့သို့သော anogenital တူးဖော်ရေး, copulating တိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့် mount မှအောင်းနေချိန်၏ပမာဏအဖြစ်အစီအမံ, ထက်သုတ်ရည်ထိကိုယ်နှိုက်၏ညွှန်းကိန်းများတွင်ဦးစားပေးတိုးမြှင့်ရှိခဲ့သည်။ ကြောင်းလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအပြုအမူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနှင့် opiate ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦး conditional အသင်းအဖွဲ့အားဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ပေမယ့်, အသုံးပြုတဲ့ဆေးထိုး regimen (မော်ဖင်းအကိုက်၏ locomotor-ကိုသက်ဝင်သက်ရောက်မှုမှအမူအကျင့်ာင်းသွေးဆောင်အစီရင်ခံထားသည်Kalivas နှင့် Stewart က, 1991) ။ ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်တိုက်ရိုက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်နှင့်တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းများ, တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူပံ့ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတ်ရည်ထိခြုံငုံငွေပမာဏသည် 30 မိသုတ်ရည်ထိကာလ (စမ်းသပ်မှု 1) တွင်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော EF အားဖြင့်၎င်း, IF ညွှန်ပြအဖြစ်, ထိခိုက်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိ၏ပထမဦးဆုံး 10 မိ (စမ်းသပ်မှု 2) ကာလအတွင်းအရေအတွက်က intromissions ပေါင်းတောင်ပေါ်နှင့်သုက်ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း ထိုကဲ့သို့သော IE ကိုအဖြစ်သုတ်ရည်ထိအကြိမ်ကြိမ်အတွင်းသူတွေရဲ့စားသောက်အစီအမံ,1, III ကို, IR နှင့် EL သိသိသာသာပြောင်းလဲကြဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစာစားချင်စိတ်ရှုထောင့်ပေါ်တွင်အရေးကြီး၏ဦးစားပေးအကျိုးသက်ရောက်မှု (ယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အတည်ပြုFiorino နှင့် Phillips က, 1995) ။ အားဖြင့်လေ့လာမှုမတူဘဲ မစ်ချယ်နှင့် Stewart က (1990)ကျနော်တို့ကဒီသက်ရောက်မှုကိုကြွက်မူးယစ်ဆေးထိုး (ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်၏လွတ်လပ်သောဖြစ်တွေ့ပြီ။ ဒါဟာ (ထို AMPH အုပ်စုအားလုံးကြွက်ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်အတွက် copulated ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ဒီဆေးထိုး regimen အားဖြင့်သွေးဆောင်ဃ-စိတ်ကြွဆေး sensitive က, လိင်နုံကြွက် copulate လိမ့်မည်ဟုအာမမခံကြောင်းမှတ်သားရပါမည်Fiorino နှင့် Phillips က, 1995) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ d-amphetamine နှင့်ကြိုတင်ဖော်စပ်ထားသည့်ကြွက်များ၏အလွန်မြင့်မားသောလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ> ၈၅%) အတွင်းကူးစက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
ယခင်အစီရင်ခံစာများ (မျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်တစ်ချိန်ကမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးတုံ့ပြန် medial preoptic ဧရိယာ (mPOA) တွင်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ် NAC DA efflux သာလည်း copulated ကြောင်းအထီးကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့ကြHull et al ။ , 1995; ဝမ် et al ။ , 1995; Fiorino et al ။ , 1997a) ။ အလားတူဆက်ဆံရေးဟာပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်; တစ်ဦးချင်းကြွက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, NAC DA efflux အတွက် precopulatory တိုးနောက်ဆက်တွဲ copulatory အပြုအမူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆက်အုပ်စု NAC DA efflux မရှိသိသာထင်ရှားသောစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးရှိခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးနှစျခုအဆက်ကြွက် (25%) copulate ခဲ့ပါဘူး, နှင့်အဆက်အုပ်စုတစ်စုအတွက်လက်ခံအမျိုးသမီးတုံ့ပြန်ယုတ် NAC DA ပြင်းအားအတွက်သက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု attenuated ခဲ့သည်။ mesolimbic DA ဂီယာတိုးပွားလာကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးနုံကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် (အနေနဲ့အစောပိုင်းက microdialysis စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏Wenkstern et al ။ , 1993) ။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးတုံ့ပြန် NAC DA ပြင်းအားအတွက်တိုးမြှင့်လိင်နုံအထီးကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အဲဒီမှာ NAC DA efflux တစ်သိသိသာသာတိုးပွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းအဆက်အုပ်စု AMPH အုပ်စုသည်ဆွေမျိုး၌ရှိ၏, ဤဟာအစာစားချင်စိတ်အဆင့် (မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသမီး) နှင့်ပထမဦးဆုံး copulatory နမူနာနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းထင်ရှားခဲ့သည်။ အဆက်ကြွက် noncopulating အထက်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း NAC DA ပြင်းအားအတွင်းအစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ် copulatory မြင့်တက်ဖို့အထောက်အကူမပြုခဲ့။ ထို့ကြောင့်, အဆက်ကြွက်မှဆွေမျိုး AMPH ကြွက်များအတွင်းပထမဆုံး copulatory နမူနာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိသုတ်ရည်ထိတိုးမြှင့်ငွေပမာဏနှင့်သုက်၏အထူးသဖြင့် သာ. အရေအတွက်က, အ AMPH အုပ်စု NAC DA ၏တိုးပွား efflux ရှင်းပြပေမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကောက်ယူ Chronoamperometry စမ်းသပ်ချက် (DA နှင့်ဆက်စပ်အထွတ်အထိပ်ဓာတ်တိုးရေစီးကြောင်းသုက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသကြPhillips က et al ။ , 1991; Fiorino et al ။ , 1997b), ကသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်မှဦးဆောင်သည့်ကျန်းမာသန်စွမ်းလိုက်စားလှုပ်ရှားမှုအကျယ်ချဲ့ NAC DA efflux ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်ပေမယ့်။ ဤကိစ်စတှငျကအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ "သူတွေရဲ့စားသောက်" အဆင့် (ဆိုလိုသည်မှာသုတ်ရည်ထိ) များစွာသောအစာစားချင်စိတ်အစိတ်အပိုင်းများကို (ပါရှိသည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Fiorino et al ။ , 1997a), နှင့်ကတဦးတည်းအစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်အခြားနဲ့အတူဦးစား NAC DA efflux ပတျသကျဖို့, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ပထမဦးဆုံး copulatory နမူနာစဉ်အတွင်းထိခိုက်ကြွက်များ၏ပြင်းထန်သောအပြုအမူ, အဆက်ကြွက်မှဆွေမျိုး, အုပ်စုများအကြား neurochemical profile များကိုများတွင်ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။
ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်သည့် NAC အတွက်လုပ်ခဲ့ပြီး dopaminergic ဂီယာ၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုးမြှင် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုလိင်နုံအထီးကြွက် (အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်လွယ်ကူချောမွေ့နိုငျသောလေ့လာရေးဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်Agmo နှင့်ကောက်ယူသူ, 1990) ။ အဆိုပါ mPOA အတွက် Dopamine အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့် (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်Pfaus နှင့် Phillips က, 1991; Hull et al ။ , 1993, 1995; Shimura et al ။ , 1994; Mas et al ။ , 1995;Sato et al ။ , 1995), နှင့် mPOA DA ဂီယာပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်တိုးမြှင့်။
တစ် ဦး ကစနစ်တကျ amine-amphetamine စိန်ခေါ်မှုလည်းတိုးအုပ်စုတစ်စု locomotor အပြုအမူနှင့် CONT အုပ်စုနှင့်ဆွေမျိုး AMPH အုပ်စုတွင် NAC DA efflux ခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ဆေးဝါးကုသမှုကြီးထွားလာခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သန္ဓေသား DA ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုရပ်စဲပြီးနောက်ကာလရှည်အကွာအဝေး (> ၁၄)) တွင်အကဲဖြတ်သည့်အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအသိသာမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်ကြောင်းပြသသည်။ ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Kuczenski et al ။ , 1997) ။ သတိပြုရန်ပစ္စုပ္ပန်မူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ကျန်နေတဲ့လိင်-related အနံ့နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက် neurochemical တုံ့ပြန်မှုရန်, ဖြစ်ကောင်း differential, လှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူဤရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်အတွက်, သို့သော်, ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။ estrous အမျိုးသမီး၏လှောင်အိမ်ကနေအိပ်ယာအထီးကြွက်များတွင် extracellular NAC DA တိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံထားသည် (မစ်ချယ်နှင့် Gratton, 1992).
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏မက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ (နှင့်ကိုက်ညီများမှာRobinson နဲ့ Berridge, 1993), အရာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်တွေကို၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ mesotelencephalic DA function ကိုတစ်ဦးတိုးပွားနေတဆင့် psychostimulants ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်း; တိုးမြှင့် mesotelencephalic DA ဂီယာနောက်ဆုံးမှာ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏အင်္ဂါရပ်များ defining ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေ, တေယျ။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှင့်အတူယခင်စမ်းသပ်ချက် psychostimulants မှတိရစ္ဆာန်များ၏ preexposure အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး (အမျိုးမျိုးအစီအမံ facilitated တွေ့ရှိခဲ့Woolverton et al ။ , 1984; Horger et al ။ , 1990, 1992;Piazza et al ။ , 1990; Mendrek et al ။ , 1998; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု လီ et al ။ , 1994) ။ လတ်တလောလေ့လာမှု၌, Mendrek et al ။ (1998) အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်တစ်ဦးသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားချိုးအချက်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်သရုပ်ပြ thatd-စိတ်ကြွဆေး-sensitized ကြွက်, Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဃ-စိတ်ကြွဆေးတိုးလှုံ့ဆျောမှုပြ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကိုသဘာဝမက်လုံးပေးခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းသောသူတို့အားထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏တိုးမြှင့်ကိုတိုးချဲ့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, previousd-စိတ်ကြွဆေးကုသ pheromones ပါဝင်သည်ရာ estrous အမျိုးသမီး, ultrasonic အသံ, နားကိုလှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့်နွှယ်သည်လည်းပျံတတ်သော၏ခြွင်းချက်မရှိမက်လုံးပေးတွေကိုအရေးပါမှု amplified ကြစေခြင်းငှါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပံ့ပိုးဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှတည်ရှိပြီးတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်လုပ်ခဲ့ပြီး NAC DA ဂီယာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်း mesolimbic DA စနစ်ကဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သောအငြင်းအခုံခိုင်မာစေ။
DA လွှာမှ blockers နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြား cross-sensitive လည်းလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်။ Bupropion, DA လွှာမှပိတ်ဆို့နိုင်သောလက္ခဏာမူးယစ် (Cooper က et al ။ , 1980; Nomikos et al ။ , 1989လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်ကုသယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလူနာများတွင်), ပိုကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (Crenshaw နှင့် Goldberg, 1995) နှင့်စိတ်ရောဂါမမှန် (Model et al ။ , 1997) ။ ဒါဟာတုံ့ပြန်လုပ်ခဲ့ပြီး NAC DA efflux အတွက် bupropion ရလဒ်များအုပ်ချုပ်ရေး, (10 21 ဃ×လေလံဆွဲ / ကီလိုဂရမ် mg) စူးရှမဟုတ် (10 / ကီလိုဂရမ်,2ဃ×လေလံ mg) preclinical လေ့လာမှုများကြောင့်ရေရှည်ပြသပြီဟုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် (က bupropion စိန်ခေါ်မှုမှNomikos et al ။ , 1989, 1992) ။ ဆနျ့ကငျြ, နာတာရှည် bupropion ကုသမှုပြီးနောက် striatum အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ DA ဂီယာမရှိသိသိသာသာတိုးပွား (ရှိခဲ့Nomikos et al ။ , 1992) ။ bupropion တို့၏ prosexual သက်ရောက်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့အားအလားတူအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် mesolimbic DA စနစ်ရေရှည်အလုပ်လုပ်တဲ့တိုးမြှင့်သွေးဆောင်ရန်ဝင်းများ၏စွမ်းရည်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့က၎င်း၏အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုငျသညျ။
သြဂုတ်လ 3, 1998 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူအောက်တိုဘာလ 16, 1998 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံအောက်တိုဘာလ 21, 1998 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကနေဒါ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီအနေဖြင့်အုပ်စု Grant က PG-12808 ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ခြင်းအခန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်၎င်းတို့၏အကူအညီအတွက်ဤစမ်းသပ်ချက်များနှင့် Fred သည် LePiane နဲ့ Keith Waldron ပို့ချ၌သူ၏အကူအညီတောင်းသည်ဒါဝိဒ် Mutch ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူမ၏အတွင်းရေးမှူးန်ဆောင်မှုများအတွက် Ariane Coury နဲ့ Jim Pfaus ကသူတို့ရဲ့အထောကျအကူမှတ်ချက်များနှင့် Liz McCririck ဖို့အများကြီးကျေးဇူးတင်စကား။
စာပေးစာယူဒေါက်တာ AG က Phillips ကဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာန, 2136 အနောက် Mall, ဗန်ကူးဗား, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ, ကနေဒါ, V6T 1Z4 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ကောက်ယူသူ Z ကို
(1990) catecholamines နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမပါဘဲအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 35: 327-334 ။
အဆိုပါလိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်အပြုအမူထုတ်ယူနိုင်ရန်လုံလောက်သောအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုများ (1941) အားသုံးသပ်ခြင်း။ J ကို comp Psychol 33: 163-207 ။
(1992) Dopamine အစာစားချင်စိတ်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ကာကွယ်ရေးအပြုအမူတွေ။ prog Neurobiol 39: 247-279 ။
အဆိုပါ medial preoptic နျူကလိယသို့ galanin ၏ (1993) Microinjection ယောက်ျားကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Physiol ပြုမူနေ 54: 615-624 ။
Cooper က BR,
(1980) အပြုအမူနှင့်လက္ခဏာ bupropion (Wellbutrin) ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်ရောက်မှု: dopamine လွှာမှ၏ရွေးချယ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းတို့အတွက်သက်သေအထောက်အထား Vivo အတွက်. J ကို Pharmacol Exp Ther 215: 127-134 ။
Goldberg က JP
(1995) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးဗေဒ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ (WW က Norton, နယူးယောက်) ။
(1992) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွါး: အသစ်အဆန်းများနှင့်ရွေ့လျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience 106: 181-191 ။
(1990) လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 14: 217-232 ။
(1995) D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဝယ်ယူ facilitated ။ Soc neuroscience Abstr 657.12: 1673 ။
(1993) ကို ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ၏လျှပ်စစ်ဆွကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 55: 131-141 ။
(1997a) နျူကလိယအတွက် Dynamic အပြောင်းအလဲများကိုအထီးကြွက်များတွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ J ကို neuroscience 17: 4849-4855 ။
(1997b) နျူကလိယအကြား Fine ယာယီဆက်စပ်မှုသုံးပြီးအထီးကြွက်များတွင် dopamine efflux နှင့် copulatory ဖြစ်ရပ်များ accumbens Vivo အတွက် chronoamperometry ။ Soc neuroscience Abstr 533.1: 1358 ။
Shelton K သည်,
Schenk S က
စိတ်ကြွဆေးနှင့်နီကိုတင်းဖို့ (1992) Preexposure Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းတဲ့အနိမ့်ထိုးဖို့ကြွက် predisposes ။ Psychopharmacology 107: 271-276 ။
Hull က EM,
(1993) သုတ်ရည်ထိအထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဘဝကသိပ္ပံ 52: 935-940 ။
Matuszewich L ကို
အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာ (1995) Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience 15: 7465-7471 ။
(1993) က circuitry သပ္ပါယ်မော်တာတုံ့ပြန်မှုသို့စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှု၏ဘာသာပြန်ချက်ဖြန်ဖြေ။ Limbic မော်တာဆားကစ်နှင့် neuropsychiatry, eds Kalivas PW, Barnes CD ကို (စီအာစီ, Boca Raton), စစ 237-287 ၌တည်၏။
Kiyatkin EA ၏
(1995) mesolimbic dopamine ၏ Functional အရေးပါမှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 19: 573-598 ။
Kuczenski R ကို,
အမျိုးမျိုးသောကုသပြီးနောက် (1997) အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှ extracellular dopamine တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology 134: 221-229 ။
တစ်တိုးတက်သောအချိုးပါရာဒိုင်းအတွက်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှ (1994) စာနာထောက်ထားရေး။ Psychopharmacology 116: 326-332 ။
stria terminalis ၏ medial preoptic ဧရိယာနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၌ (1997) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်: အထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူနှင့် noncontact စိုက်ထူအပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို neuroscience 17: 5245-5253 ။
Madlafousek J ကို,
Hlinak Z ကို
ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်အထီးရဲ့ copulatory အပြုအမူများ၏မူလတန်းစတင်ဘို့အမျိုးသမီးရဲ့ precopulatory အပြုအမူများ (1983) အရေးပါမှု။ ပြုမူ 86: 237-249 ။
Mas M က
ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1995) Neurobiological Correlate ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 19: 261-277 ။
Mas M က,
Fumero B က,
(1995) Voltammetric နှင့် sociosexual interaction ကနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက် monoamine neurotransmitter လွှတ်ပေးရေး microdialysis စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 71: 69-79 ။
(1995) Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 19: 19-38 ။
(1998) စိတ်ကြွဆေးမှကြွက်၏ Pre-ထိတွေ့နေတဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး sensitizes ။ Psychopharmacology 135: 416-422 ။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း chronoamperometry လေ့လာမှု: အဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်း (1992) Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience လက်တ 140: 81-84 ။
ယခင်ကမော်ဖင်းအကိုက်စနစ်တကျထိုးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1990) နည်းပြ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 35: 367-372 ။
bupropion, fluoxetine, paroxetine နှင့် sertraline ၏ (1997) နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ Clin Pharmacol Ther 61: 476-487 ။
ကြွက် striatum နှင့်နျူကလိယအတွက် extracellular dopamine ပြင်းအားအပေါ် bupropion ၏ (1989) ထူးခြားသောသက်ရောက်မှုများကလေ့လာခဲ့ accumbens Vivo အတွက် microdialysis ။ Neuropsychopharmacology 2: 273-279 ။
ကြွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏ Interstitial ပြင်းအားအပေါ်နာတာရှည် bupropion ၏ (1992) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology 7: 7-14 ။
(1998) စောင့်ကြည့်ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒ Vivo အတွက်: voltammetric နည်းစနစ်, အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အမူအကျင့် applications များ။ Crit ဗြာ Neurobiol 12: 69-127 ။
(1995) ကို dorsal အတွက် dopamine neurotransmission ၏ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်အချိန်-မှီခိုထိခိုက်စေ ventral striatum: ကြွက်ပြုမူအတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ synapses 19: 56-65 ။
(1997) CD-ROM ကိုအပေါ် stereotaxic သြဒီနိတ်၌ကြွက်ဦးနှောက်။ (Academic, San Diego မှ) ။
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏ (1991) အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience 105: 727-743 ။
(1991) Dopamine နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ by: ထောက်ပံ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို Vivo အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine စနစ်တွင်: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူရန်, eds Willner P ကို, Scheel-Krüger J ကို (Wiley, Chichester), စစ 199-224 ။
LeMoal M က,
ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ (1996) Neurobehavioural ယန္တရားများ။ Curr Opin Neurobiol 6: 228-236 ။
ကြွက်များတွင်ပုလ် copulatory အပြုအမူများ (1976) Functional ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အပြုအမူ၏လေ့လာမှု, Vol 7, eds Rosenblatt JS, မင်ဒ RA, Shaw ကအီး, ဘီယာကို C (Academic, Orlando တွင်), စစ 91-154 အတွက်ကြိုတင်။
(1996) လှုံ့ဆျောမှုများ၏အမူအကျင့် neurochemistry: နျူကလိယ၏ dynamic လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်အယူအဆရေးရာကိစ္စများ dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 64: 137-149 ။
Sato Y ကို,
Wada H ကို,
Horita H ကို,
ဆူဇူကီး N ကို,
Adachi H ကို,
Kato R ကို,
Tsukamoto T က,
Kumamoto Y ကို
ကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်း medial preoptic ဧရိယာထဲမှာ (1995) Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res 692: 66-70 ။
မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ (1995) မော်လီကျူးယန္တရားများ။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်ကို, eds Cowan WM, သေနတ်သမား EM, Stevens CF, Thompson က RF (နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ Inc မှ, Palo Alto), စစ 463-495 ၌တည်၏။
Shimura T က,
Yamamoto T က,
Shimokochi M က
(1994) က medial preoptic ဧရိယာအထီးကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်: Re-အကဲဖြတ်အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိရိစ္ဆာန်များရွေ့လျား၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res 640: 215-222 ။
Huang က RL,
မွေးဖွားမီအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်အလေးပေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် (1995) Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience လက်တ 200: 29-32 ။
လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်မှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် (1993) Dopamine ဂီယာတိုး။ ဦးနှောက် Res 618: 41-46 ။
Cervo L ကို,
မျောက်တွေကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (1984) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 16: 293-330 ။
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော hypersexuality ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုအာရုံကြောတုန့်ပြန်မှု ဦးနှောက်, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013, 136 (2): 400-411
သမ်ဖက်တမင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတစ်ပြိုင်တည်းထိတွေ့နောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးဆုကြေးပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အမျိုးသားသည်အထိအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစေတယ် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,9နိုဝင်ဘာလ 2011, 31 (45): 16473-16482
လူမှု Bond တစ်ဦး Dopamine D1 receptor-mediated ယန္တရားမှတဆင့်ဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်း Properties ကိုနည်းချင်နည်း အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 1 ဇွန်လ 2011, 31 (22): 7960-7966
ကြွက်များတွင်ကင်းာင်းမော်ဒယ်များတစ်ခု anhedonia ကဲ့သို့အခွအေနေ Neuropsychopharmacology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 1 ဧပြီလ 2011, 14 (3): 333-346
ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများတွင် cue- သွေးဆောင် striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှု ဦးနှောက်, 1 ဧပြီလ 2011, 134 (4): 969-978
ဆယ်ကျော်သက်အရက်အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအန္တရာယ် preference ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ပျက်စီး encoding ကသူနဲ့ဆက်စပ်သော်လည်းမ mesolimbic dopamine အားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်ပါတယ် PNAS, 29 မတ်လ 2011, 108 (13): 5466-5471
like နှိပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တက်ကြွသောကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များချို့တဲ့: အသိုင်းကြိုး-R မေးခွန်းလွှာ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်, 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2010, 24 (2): 257-266
စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ, 12 အောက်တိုဘာလ 2008, 363 (1507): 3137-3146
ယခင်အမ်ဖီတမင်း၏ထိတွေ့မှုကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှု - သန္ဓေတားဆုအတွက်“ လိုချင်ခြင်း” ကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 1 အောက်တိုဘာလ 2001, 21 (19): 7831-7840
သည်အထိအတွက်အခြေခံအခြေအနေများအောက်တွင်နှင့်ကင်း Withdrawal စဉ်အတွင်းဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေးဆုကြေးအတွက် Adenosine A2 receptor ၏အခန်းက္ပ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 15 ဒီဇင်ဘာလ 1999, 19 (24): 11017-11026